Éditorial Archives - Page 2 sur 3 - FJKM Québec - Canada
Posts tagged with ‘Éditorial’
Febroary 2019 – Mitondrà Teny Soa Mahafaly
1 février 2019 by Njaka Ramanandafy
Hits: 192EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2019 ity. “Mitondrà Teny Soa Mahafaly” Izany lohahevitra miendrika baiko sy fampirisihina izany dia tena antom-pisiantsika Fiangonana ka hanehoantsika fahavononana fa iainantsika mandritry ity volana ity. Ireto misy teboka vitsivitsy tiana hifampizarana amintsika amin’izany: Baiko sy adidintsika mpino ny hitondra ny […]
Janoary 2019 – Mahatahotra Andriamanitra Tompo
8 janvier 2019 by Bako Raveloson
Hits: 189“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2019 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona 2019 izao. “Mahatahotra Andriamanitra Tompo” Izany no lohahevitra […]
25 desambra 2018 – Fiarahabana Krismasy
23 décembre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 390“Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra” Lioka 2: 10 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao KRISMASY 2018 izao. Mba hitoetra ao amintsika tokoa anie Ilay IMANOELA, Andriamanitra monina amintsika ka hanome fifaliana sy fitahiana […]
Desambra 2018 – Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo
3 décembre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 130Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra Araka ny efa fantatsika dia ny volana desambra no mamarana ity taona diavintsika ity. Ary dia lohahevitra vaovao indray no banjinintsika manao hoe: “Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo” Vao mandre izany lohahevitra izany isika dia izao no mby ao an-tsaina: Afaka mifaly tanteraka ny kristiana […]
Novambra 2018 – Mivonona hihaona amin’ny Tompo
4 novembre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 146Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Mivonona hihaona amin’ny Tompo” Amin’ity vola novambra ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “fahavononana” sy “fihaonana amin’ny Tompo” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Tsy mahagaga izany fa efa ankatoky faran’ny taona ohatran’izao dia mihomakomana hiditra amin’ny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa Tompo isika Kristiana. Ny […]
Oktobra 2018 – Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo
1 octobre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 425Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra “Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo” Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Any am-piangonana, any an-tokantrano, any anaty fiarahamonina rehetra any dia ventesina hatrany ny voambolana hoe “rariny sy hitsiny” satria mahatsara antsika izany. Raha mikasika […]
Septambra 2018 – Sahia manohitra ny kolikoly
1 septembre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 143Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Sahia manohitra ny kolikoly” Lohahevitra efa mahazatra no iainantsika amin’ity volana septambra ity. Satria efa hatramin’ny ela, an’arivon-taonany maro, no nisy izany kolikoly izany ary ao anaty Baiboly dia tena miresaka azy ihany koa. Koa aoka isika tsy hieritreritra fa tsy adidin’ny Fiangonana ny […]
Aogositra 2018 – Mitsangana hanohitra ny herisetra
31 juillet 2018 by Bako Raveloson
Hits: 141Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Mitsangana hanohitra ny herisetra” Izany indray no lohahevitra, miendrika baiko, banjinintsika Fiangonana amin’ity volana aogositra ity. Marina fa tsy misy tia izany herisetra izany isika, nefa dia tsy misaraka amin’ny fiainantsika andavan’andro ihany koa izany. Tiako ary ny mizara aminao ireto fahalalana kely ireto […]
3 juillet 2018 by Bako Raveloson
Hits: 260Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Sahia mitory ny fahamarinana” Amin’ity vola jolay ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “FAHAMARINANA” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Mazava tsara ny tian’izany ho lazaina amintsika: Raha miasa isika dia miasà am-pahamarinana; Ny fanompoana ataontsika rehetra dia tanteraho am-pahamarinana; Aoka ho marina ny fanoloran-tena […]
Jiona 2018 – Miantsoa fanafahana avy amin’ny Tompo
1 juin 2018 by Bako Raveloson
Hits: 193Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra Volana vaovao indray no lalovantsika izao ary dia lohahevitra vaovao ihany koa no iainantsika : “Miantsoa fanafahana avy amin’ny Tompo” Mahafinaritra ery ny mandre izany lohahevitra izany satria tsapa avy hatrany fa hay mbola misy tsirim-panantenana ihany ny hanafahana ireo geja rehetra mamatotra antsika. […]